I-china i-fiber splicing ebiyelweyo abavelisi kunye nabaxhasi-i-Chaolian ye-elektroniki
Ikhaya > Iimveliso > Inkqubo yeFiber Optic > Ifayibha usifake ebiyelweyo
Ifayibha usifake ebiyelweyo eyenziwe China ingathengwa Chaolian Electronic ngamaxabiso asezantsi. Umvelisi oqeqeshiweyo kunye nomzi mveliso weemveliso ezikumgangatho ophezulu eChina.
Ifayibha usifake ebiyelweyo uhlobo Tye
Olu luhlobo lweFiber Splicing Enclosed Horizontal. Ubuninzi beetheyibhile ezingama-96 zibandakanya iitreyi ezi-4. Siya kubonelela ifayibha usifake ebiyelweyo ngaphezu kweminyaka engama-20 njengenkampani evunyiweyo ye-ISO, i-sur-link yenza inkqubo engqongqo yokuqinisekisa umgangatho, iimveliso zethu zikwabonelela ngeemvume ezisemgangathweni zamanye amazwe eziqinisekiswe yi-CE, ETL, ul njl.
Ifayibha usifake ebiyelweyo nkqo (3 IN-3 OUT) 72 Imicu
Olu luhlobo lweFiber Splicing Enclosure Vertical type (3 IN-3 OUT) 72 Fibers. Umthamo omkhulu zii-144 fibers ezibandakanya iitreyi ezi-6. Siya kubonelela ifayibha usifake ebiyelweyo ngaphezu kweminyaka engama-20 njengenkampani evunyiweyo ye-ISO, i-sur-link yenza inkqubo engqongqo yokuqinisekisa umgangatho, iimveliso zethu zikwabonelela ngeemvume ezisemgangathweni zamanye amazwe eziqinisekiswe yi-CE, ETL, ul njl.
I-Chaolian Electronic yenye yezobuchwephesha Ifayibha usifake ebiyelweyo abavelisi kunye nabathengisi e China. Umzi mveliso wethu ubonelela ngoluhlu lwamaxabiso. I Ifayibha usifake ebiyelweyo eveliswe ngumzi mveliso wethu yamkelwe kakuhle ngabathengi ngexabiso eliphantsi. Wamkelekile ukudibana.